Icandelo lezokhenketho: ukuthatha ingqalelo ehlotyeni | Ezezimali
Icandelo lezokhenketho: ukuthatha ingqalelo ehlotyeni
Xa siphantse ukuntywiliselwa kwiinyanga ezishushu zasehlotyeni, ixabiso lecandelo lezokhenketho zezinye zezindululo ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukwenza ulondolozo lube nenzuzo ngeli xesha lonyaka. Apho ifayile ye- ukuhamba kwabakhenkethi kubaluleke kakhulu kwaye kunceda ixabiso lezabelo zabo likwimeko yokulixabisa. Kuqheleke kakhulu ukuba olu hlobo lwamaxabiso luxatyiswe ngeli xesha lonyaka, ngelixa izilungiso ezibaluleke kakhulu zisenzeka kumaxesha onyaka aseleyo onyaka. Ngayiphi na imeko, ziqwalaselwe ngenye indlela yokuba abatyali zimali abancinci nabaphakathi benze ukonga kwabo inzuzo evela kula maxesha achanekileyo.
Ngale ndlela, ayinakulityalwa ukuba icandelo lezokhenketho limela ishishini lokuqala elizweni. Apho kukho amacandelo abalulekileyo njengehotele, iinkonzo zabakhenkethi kunye neendlela zomoya. Kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain kukho amaxabiso amathathu kuphela ahlangabezana nezi mpawu: IAG, Sol Meliá kunye noAmadeus. Ngeendlela zokuziphatha ezahlukileyo phantse kwisiqingatha sokuqala sonyaka esisichithe kulo nyaka ka-2019. Nangona kunjalo, iinyanga zasehlotyeni lixesha elihle lonyaka lokwenza imisebenzi nala maxabiso kwiimarike zemali.
Kwelinye icala, kufanele kuqatshelwe ukuba ihlobo lixesha apho kukhuthazwa ukuba iinkonzo zakho okanye iimveliso ziyafunyanwa okanye isetyenziswe ngabasebenzisi. Ngefuthe elibonakalayo kwingxelo yengeniso yezi nkampani kwaye oko kunokubangela ukuba ixabiso lezabelo zabo lixabise kwezi nyanga zineholide. Ke ngoko, baya kuba nakho ukudibanisa ipotfoliyo yotyalo-mali ukusukela ngoku ngeyona njongo iphambili yokwandisa inzuzo yale misebenzi. Ngaphezulu kokunye ukuqwalaselwa kweqhinga.
1 Icandelo lezokhenketho: amacandelo ahlukeneyo
2 Kutheni ilixesha lokutyala?
3 Sol Meliá: ukuvuleka ngakumbi
4 I-NH iphucula iziphumo
5 Iindawo zokufikela ezingakumbi ngo-2019 eIberia
6 Unxibelelwano ne-Itali nePortugal
Icandelo lezokhenketho: amacandelo ahlukeneyo
Ngayiphi na imeko, iinkampani ezikweli candelo libaluleke kakhulu kuqoqosho lwesizwe azinayo imigca efanayo yeshishini. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, licandelo elibonakaliswa ngokuba ezahlukeneyo kakhulu kuba iifomathi ezininzi zikhona kwimigca yeshishini. Ukusuka kwiiarhente zohambo ngexabiso eliphantsi ukuya kwezona nkampani zibalulekileyo kwiinqwelomoya kunye nokudlula ngokusengqiqweni kumatyathanga eehotele zamanye amazwe. Ngombutho womanyano phakathi kwabo bonke kunye nolungiselelo lwenkonzo yabakhenkethi. Nangona kwilizwe lethu ukumelwa kwiimarike zezabelo kunqabile ngokuxhomekeke kwindima edlalwa kukhenketho kuqoqosho lwaseSpain.
Kule meko ngokubanzi, yenye yeendlela zokubheja zentengiso zestokhwe kwiinyanga zasehlotyeni. Apho a umsebenzi owandisiweyo kwiimodeli zabo zeshishini. Ewe kunjalo, ngaphezulu kakhulu kunakwamanye amaxesha onyaka, apho izehlo zayo ziphantsi kakhulu ngenxa yezizathu ezininzi. Ngale ndlela, inokuba yinto yokubheja ukuvula izikhundla kwezinye zeenkampani ezidwelisiweyo kuba zivumela ukufumana inzuzo eyinkunzi ngexeshana elifutshane. Kuyinyani ukuba sisicwangciso esingaqinisekiswanga, kodwa oko kudla ngokufezekiswa ngokukhululeka kwezi nyanga zonyaka.
Kutheni ilixesha lokutyala?
Ukukhetha la maxabiso kwiinyanga zasehlotyeni kunokuba yinkqubo enokuthenjwa yokukhetha ukwenza imisebenzi kwiimarike eziqeshisayo. Ngenxa yezizathu ezininzi kwaye phakathi kwayo kubonakala ukuba ezi nkampani kunokwenzeka ukuba zikhuphuke unyaka wonke. Kananjalo nokuba ngamaxabiso angenanto yakwenza ne imijikelo yeshishini, nangona eli candelo linokubanceda ukuba bafezekise ezona njongo zabo zingxamisekileyo. Ngembuyekezo enomdla kwimidla yabona batyalomali abancinci nabaphakathi.
Kwelinye icala, kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba la maxabiso ayingowona aqhuba kakuhle kwiinyanga ezidlulileyo. Ngaphandle kokuhla kwexabiso, njengakwimeko ethile yeetyathanga zehotele ezibonisa ilahleko ebalulekileyo kwixabiso lazo. Nangona ngokuchaseneyo, bane eyona nto iphambili ebonakalayo ephezulu kunakwamanye amacandelo eemarike zezabelo. Ngayiphi na imeko, babhaptizwa kwinkqubo ye-bearish yento ethile apho ukuthengisa kulawula ngokucacileyo ukuthengwa.
Sol Meliá: ukuvuleka ngakumbi
Ikhonkco lehotele laseSpain iMelía Hotels Internacional libhengeze ukuba likulungele ukuvula izakhiwo ezingama-50 ezintsha zehotele ngowama-2020 njengenxalenye yesicwangciso sokwandisa kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela, phakathi kwayo iMexico, apho iqela lenze utyalomali kunxweme ye Cancun. "Njengenkampani yesithathu ngobukhulu ehotele kunye nenkokheli eSpain, iQela liyaqhubeka nokutyala imali kwiimarike, ezinje ngeSpain, ngokuqinisa kunye nokuvuselela iipropathi ezikhoyo ngoku kunye nokuvuleka okutsha, ngelixa lisanda kwiimarike ezisakhulayo, kubandakanya nemimandla. I-Asia-Pacific kunye ne-Afrika ”, ibonisa utyikityo kunxibelelwano.
Kwi-2019, inkampani esekwe ngo-1956 iceba ukuhambisa iihotele ezingama-29 eAsia, eAfrika, eYurophu naseMelika, phakathi kwazo IParadisus Playa Mujeres, eziza kuvula iingcango zalo phakathi kunyaka olandelayo. Yindawo yokuphumla entle UPlaya Mujeres, eya kuba namagumbi angama-498, imizuzu engama-35 ukusuka eCancun International Airport kunye nemizuzu eli-10 kuphela ukusuka edolophini. "IParadisus Playa Mujeres iza kubonelela ngokufikelela kulwandle lwabucala, apho banokuhamba ngesikhephe kuLwandle lweCaribbean kwaye bonwabele imibono emnandi."
I-NH iphucula iziphumo
Ngo-2018 iQela leehotele i-NH ligqithile kuqikelelo lwalo nyaka, kufunyanwa iziphumo ezilungileyo kwimbali yalo. Inkampani iyiphindaphinde inzuzo yayo ephindaphindayo, ukuya kuthi ga kwi-72 yezigidi; ingeniso yayo inyuke nge-4,6%, ukuya kwi-1.623 yezigidi zeerandi; i-EBITDA yayo inyuke nge-14%, ukuya kuthi ga kwi-265 yezigidi zeerandi, kwaye yanciphisa kakhulu ityala layo elipheleleyo, ukuya kwi-171 yezigidi zeerandi (0,6 amaxesha e-EBITDA).
Iqela liqinisekisa i-EBITDA ejolise kuyo ye-285 yezigidi ze-euro ze-2019 kunye nenzuzo ephindaphindayo yenzuzo ejikeleze i-100 yezigidi ze-euro. Ngolu lindelo, iBhodi yabaLawuli yeNkampani iya kuphakamisa kwiNtlanganiso yabanini zabelo ngokubanzi elandelayo Isahlulo seesenti ezili-15 ngesabelo ngasinye, ngenxa yeziphumo ze-2018, ngentlawulo eqikelelweyo efikelela kwi-59 yezigidi zeerandi.
IGosa eliLawulayo eliyiNtloko leQela leehotele i-NH, uRamón Aragonés, wanelisekile ngokukodwa ziziphumo ezifunyenwe kunyaka. “Baqala kakuhle ukuqhubela phambili umanyano lwethu neMinor International. Ngokudibeneyo siza kuseta isicwangciso-qhinga seminyaka emihlanu sokwandisa izibonelelo zokusebenzisana kwiindawo zethu zempembelelo kwaye sisebenzise ukuhambelana kwamashishini ethu ", wabonisa.
Iindawo zokufikela ezingakumbi ngo-2019 eIberia
Iberia iya kubonelela ngeenqwelomoya ezimbini ngeveki phakathi kweMadrid neCorfu ngo-Agasti, kunye neeshedyuli ezivumela ukudibanisa nasiphi na isixeko saseSpain ngale paradesi yamanzi icacileyo, esona siqithi sikhulu seIonia. Ukongeza kwiCorfu, kweli hlobo i-Iberia Group iza kubonelela ngeenqwelo moya eGrisi zisiya eAthene, Heraklion, Santorini naseMykonos. Kwelinye icala, komeleza ukuzibophelela kwayo kwimakethi yaseFrance ngale ndawo ikwisiqithi saseCorsica. Nge-Agasti, i-airline iya kubonelela ngeenqwelomoya ezintlanu ngeveki ukuya eBastia- yonke imihla, ngaphandle koMvulo nangoLwesithathu- kunye neeshedyuli ezahlukeneyo ezivumela lonke unxibelelwano. Ukongeza kwi-Bastia, iqela le-Iberia inikeza ezinye iindawo ezili-10 eFransi: IBordeaux, iStrasbourg, iLyon, iMarseille, iNantes, iNice, iParis (uCharles de Gaulle no-Orly), eRennes, eTououse, eChalons-Vatry.
I-Itali iya kuba yenye yeendlela ezinkulu zokubheja zaseIberia kweli hlobo. Isishwankathelo iindawo ezintathu zokufikela: IGenoa, eqhutywa nguIberia; IVerona, apho i-Iberia yeNgingqi yoMoya oyiNostrum kunye neBari iza kubhabha, esele ibhengeziwe yi-Iberia Express. Ukongeza, i-Iberia iyakhula e-Olbia, ethi, ukusukela ngo-Matshi ukuya ku-Okthobha, iqhutywe yi-Iberia Regional Air Nostrum eneefrikhwensi ezintathu zeveki kwaye, ngo-Agasti, iya kuba yindawo enikezelwa yi-Iberia kunye nokubhabha kube kanye yonke imihla.
Unxibelelwano ne-Itali nePortugal
Ngezi zongezo zintathu zintsha, i-Iberia Group ngoku ineendawo ezili-14 e-Itali- iBologna, iFlorence, iMilan (iLinate neMalpensa), iNaples, iRoma, iTurin, iVenice, iBari, iCatania, iCagliari, iGenoa, iOlbia, iPalermo, iVerona-, eyenza ukuba ibe yenye yeentengiso zayo kunye sipho sikhulu eYurophu. Elinye ilizwe apho i-Iberia ikhula kakhulu kweli hlobo yiPortugal. NgeLisbon iya kusebenza ukuya kuthi ga ezintlanu kwiinqwelomoya ngeenqwelo moya zemihla ngemihla kwicala ngalinye; ukuya kuthi ga kwicala ngalinye nePorto kodwa, ngaphezulu kwayo yonke, i-Iberia iyakhula e-Faro nase-Funchal.
Iinqwelomoya ezihamba noFaro -ezikade zisebenza kuphela kwiinyanga eziphakamileyo zehlobo-, kulo nyaka zandisiwe zaya kulo lonke ixesha lonyaka-ukusukela ngoMatshi ukuya ku-Okthobha-, ukongeza, ukuphindaphindeka kongezwe, ukujikeleza iinqwelomoya ezine ngeveki. Kwaye kuya kuFunchal, apho Iberia yeNgingqi yoMoya oyiNostrum Iya kubonelela ngokuhamba rhoqo kwihlobo lasehlotyeni, ukusukela ukuphela kuka-Matshi ukuya ku-Okthobha.
Njengoko sele ubonile, zininzi iindlela onokukhetha phambi kwakho ukuba ekugqibeleni ukhetha ukukhetha eli candelo lemarike yaseSpain ukuze uthenge. Ngomnqweno wokwenza imisebenzi ibenenzuzo ngexesha elifutshane, yiyo loo nto, emva kwayo yonke loo nto, ukhangela ukuba unxulumene nelizwe elihlala linzima lemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Icandelo lezokhenketho: ukuthatha ingqalelo ehlotyeni
Izicwangciso ezili-6 zotyalo-mali zokuphuhlisa eli hlobo